2011-10-23 ~ Myanmar Express
Naing Naing Htoon ‎@@ ပိန်းတာမဟုတ်ပါဘူး.... ဒေါ်လာမျက်နှာကြောင့် ဘီဘီစီ မှာရှိတဲ့ သောက်မျိုးတွေ ဟာ ကုလား ဖင်နောက်လိုက်သွားတာပါ.... $$$$คน รัก แท้ๆๆ ဘီဘီစီ မြန်မာအသံလှိုင်းကလူတွေဘယ်သွားသေကုန်ပြီလဲ ပြောတော့မျိုးချစ်မြန်မာနိုင်ငံကောင်းစားရေကိုရှေးရှုနေပါတယ်ဆို အခုကဘာလဲ သေကုန်ပြီလားမပြောတော့ဘူးလား =ီး ဆို့နေလို့လားTharr Phru ဒီလောက်ဆို..ရှက်သင့်ပါပြီ BBC ရယ် ဒီကြားထဲကမှ..အမှန်တရားကို...မျက်ကွယ်ပြုနေမယ်ဆိုရင်တော့....မင်းတို့စောက်ရှက်မရှိတာပဲဟေ့....!!!! Si Thu M H ဘီဘီစီ အနေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ သိက္ခာရှိတဲ့ သတင်းဌာန ဆိုရင် ဒီကိစ္စကို တရားဝင်ပြန်လည် တောင်းပန်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။Felix Phyo Wai Thaw မင်းဒီ ဘင်္ဂလီတွေကိုတိုင်းရင်းသားလုပ်တဲ့ကိစ္စ သမိုင်းအကိုးအကားနဲ့ရှိရင်လဲ သေချာရှင်းပြလိုက်စမ်းပါ BBC မသေချာပဲတင်ထားတယ်ဆိုလဲ အမှားကို ဝန်ခံလိုက်ပါ။ ပုန်းမနေစမ်းပါနဲ့...အမှန်တွေရေးလိုက်ရလို့ စားခွက်ပျောက် သွားခဲ့ရင် ငါတို့ပြည်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ အလှူတွေမှာ တက်စားစမ်းပါ...ပိုသိက္ခာရှိပါတယ်အလောင်း စည် သူ မြေမြိုလို လူမကုန်၊လူမြိုလို့ လူကုန်တယ်ဆိုတာ ဒီသတင်းမျိုးတွေ့ကြောင့်ပါ။ သတင်းဆရာများခင်ဗျား ကိုယ့်ကြောင့် လူမျိုးဂုဏ်မတက်ရင်နေ၊ကိုယ့်ကြောင့် လူမျိုးပျောက်မဲ့လုပ်မျိုး နောက်မလုပ်ပါနဲ့လို့ အထူးမေတ္တာရပ်ခံပါသည်။Ko Tun တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ ကောင်တွေ။ မင်းတို့ အယင်ကလုပ်ထားတာတွေအားလုံးအလကားဘဲ။ ပိုက်ဆံရတိုင်း ဟစ်နေတာ။ မင်းတို့လဲ ဘဂါင်္လီ လူမျိုးဘ၀ပြောင်းကြတော့။ မြန်မာပြည်မှာ ကြီးပြီး မြန်မာလူမျိုး ဖျက်တဲ့ ခွေးတွေNga Tun ရိုဟင်ဂျာ(ကုလား)နဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားခုချိန်မှာ ဘာပြဿနာမရှိသေးပါဖူးး(မြန်မာ နိုင်ငံ နယ်စပ်များတွင် နေထိုင်ကြပြီး အစိုးရနှင့် ပဋိပက္ခ ဖြစ်နေကြသော လူနည်းစုများမှ လူသိများသော အုပ်စုများကို ဖော်ပြလိုရင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။)အဆိုအရအဆက်အစပ်မရှိပါ..ဆန်း သစ် ကဲ BBC မြန်မာပိုင်းကလူတွေ ခင်ဗျားတို့ရွေးစရာနှစ်ခုပဲရှိတယ် မြန်မာပြည် လား ရိုဟင်ဂျာကုလားအခွင့်အရေးလား နှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုကိုရွေးရင်တော့ကျန်တစ်ခုကိုပြတ်သားရလိမ့်မယ်။အမှန်နဲ့အမှားကိုကိုယ့်ဦးနောက်နဲ့ကိုယ်သာစဉ်းစားကြတော့..Thura Tun BBCမှာအလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာများ ယခုပုံကိုပြန်ကြည့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်မွေးခဲ့သောကျေးဇူးတရားကိုပြန်အောက်မေ့ကြပါ ၊တစုံတရာကိုပြောပြချင်ဇောနဲ့ အသိ သတိများမလွတ်စေချင်ပါ ---Hlwan Moe BBC World Service မှာ ကျွန်တော့် ကော်မန့် ရေးခွင့် ပိတ်ထားပါသည် ခင်ဗျာ။ ခွေးမျိုး အင်္ဂလိပ်ကောင်တွေ နဲ့ မြန်မာ သူတောင်းစားကောင်တွေ။ အိမ် အိမ် ကဲ ... BBC ရေ ဖြေရှင်းချက် တောင်းဆိုနေသူတွေလဲ မနဲတော့ဘူး၊ ဒီအတိုင်းပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေတော့မှာလား၊ တခုခုတော့ လုပ်ဖို့ လိုပြီထင်တယ်။ Si Thu M H why BBC Team delete comments and posts shame on BBC . what is the freedom talk ? can we blame on yours mistake ? when BBC public that was mistake and apologise for it , we will stop blame on BBC . come on . go for it !Thazin Mon သြော်.. တိုင်းပြည်သမိုင်းကို လိမ်မှ ထမင်းစားရတဲ့ လူတွေပါလားးးးးးးးးးးMyo Min Aung ဘီဘီစီ မှာရှိနေတဲ့မြန်မာတွေ ခင်မျာ့ ......ခင်များတို့ ဆွေးမျိုးတွေ မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေသေးတယ် မဟုတ်လား.....Zaw Min Aung အမြန်ဆုံးဖြေရှင်ပေးပါဦး စစ်မင်း ခု ပြောနေကြတာ ရခိုင် တွေပဲလို့မထင်နဲ့ .. တစ်မျိုး သား လုံး တစ်မြေထဲဖွါး တိုင်းရင်းသား အားလုံးက လုံးဝ လက်မခံဘူး..။ ညောင်းရင် ရပ်သွားလိမ့်မယ် မြန်မာတွေ ကောက် ရိုးမီးလို့ မထင်နဲ့ ..။Si Thu M H i repeat bcoz BBC Deleted my post , ဘီဘီစီ အနေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ သိက္ခာရှိတဲ့ သတင်းဌာန ဆိုရင် ဒီကိစ္စကို တရားဝင်ပြန်လည် တောင်းပန်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ပိုး ဖလံ ဟေ့ BBC ကလူတွေ မင်းတို.ကော ဘာလူမျိုးလဲ မေးချင်တယ် မင်းတို.က ပိုက်ဆံရရင် အမေတောင် ရောင်းစားမဲ့ကောင်တွေထင်တယ်Thi Ha ရိုဟင်ဂျာသည်မြန်မာလူမျိးစုဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းထုတ်လွင့်မိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဝန်ခံထုတ်လွင့်ပေးပါမှ ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ရှားမှုကိုရပ်နိုင်ပါမယ်။ လေးစားစွာဖြင့် တာင်းဆိုလိုက်ပါသည် BBC ခင်ဗျား။Thazin Mon မလိမ့်တပတ် လုပ်သွားပြန်ပြီ ဘီဘီစီ....Zaw Ko Ko ဘီဘီစီ မတောင်းပန်သရွေ့ ( ကြေနပ်လောက်တဲ့အထိတောင်းပန်ရမယ်) ဘီဘီစီဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ရန်သူပဲ။Billy Hanna ဘီဘီစီရေ သိချင်တာလေးရှိလို့... သတင်းဌာနတစ်ခုက map of UK ပေါ်မှာ England နေရာကို မျှားထိုးပြီး အာရပ်တွေ ဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ပုံ ထည့်မယ်၊ Scotland မှာ Russians တွေကို စစ်ဝတ်စုံနဲ့ တင်မယ်၊ Wales မှာ တရုတ်တွေပုံ တင်မယ် ... ပြီးတော့မှ ပုံအညွှန်းစာသားကို UK's Minorities လို့ ရေးပေးရင် ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လို တုန့်ပြန်မှာလဲ? ဘီဘီစီဖြေပေးပါ။Thi Ha ရိုဟင်ဂျာသည်မြန်မာလူမျိးစုဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းထုတ်လွင့်မိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း တကမ္ဘာလုံးသိအောင်ဝန်ခံထုတ်လွင့်ပေးပါမှ ကျွန်တော်တို့ လှုပ်ရှားမှုကိုရပ်နိုင်ပါမယ်။ လေးစားစွာဖြင့် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည် BBC ခင်ဗျား။ (ထပ်ခါထပ်ခါ တင်မိတာတော့ အားနာပါတယ်ဗျာ။)Nyaungpin Tasay (၁) မစင်ကြယ်၊ (၂) မကောင်းသော အနံ့ရှိ၏၊ (၃) ဘေးဘျမ်းရှိ၏၊ (၄) သရဲသဘက်တို့ နေရာဖြစ်၏။ (၅) များစွာသော လူအပေါင်းတို့ ငိုကြွေးရာဖြစ်၏၊ “ရဟန်းတို့၊ သင်္ချိုင်း၌ အပြစ်တို့သည် ဤငါးမျိုးတို့တည်း။Thwaythit Sar ဘီဘီစီကို Like မလုပ်ရေး ....... ဒို့အရေး။ မဟုတ်မမှန်သော သတင်းတွေ ရေးသား ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ ဘီဘီစီကို နားမထောင်ရေး ....... ဒို့အရေး။ ရခိုင်ညီအစ်ကိုများနှင့်တကွ... ပြည်သူများအား ကျေနပ်သည်အထိ ဘီဘီစီမှ တောင်းပန်ရေး ...... ဒို့အရေးAye Thidar ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲတောင်းဆိုတော့မယ် ရခိုင်ပြည်ပေါ် ကုလားပုံတင်ထားတဲ့ ကိစကို လုပ်တဲ့လူတွေ ကိုယ်တိုင် (အန်နာဂျုံး ဆိုတာလား) တရားဝင်တောင်းပန်ပေးခိုင်းပါ ဒီလောက်တောင်းဆိုနေကျတာကို ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ စတိုင်နဲ့တော့ မလုပ်ပါနဲ့ BBC လုပ်လာခဲ့သမျှ ဒီအမှားတစ်ခုကြောင့် မြန်မာပြည်သားတွေBBC ကိုမုန်းသွားနိုင်ပါတယ်Koko Messi ပြောင်ချင်နောက်ချင်ရင် ဇာတ်ထဲသွားကြ..ကျော်ချင်ခွချင်ရင်ဆိုက်ကားနင်း...ရူးချင်နှမ်းချင်ရင်...အရူးထောင်သွား..ပိုက်ဆံလိုချင်ရင်......-ာသည်လုပ်ကြ......တိုင်းပြည်ကိုတော့ ပိုက်ဆံရဖို့ပဲကြည့်ပီး..မျက်နှာပြောင်မတိုက်နဲ့...ပြန်တောင်းပန်Winnaing Shinn BBC့ကကောင်တွေမူဆလင်ကမင်းတိုအဖေလား အမျိုးတော့ မဖျက်နဲKo Tun သူတို့က ရိုဟင်ဂျာ အထီး/အမ တွေဖြစ်ကုန်ပြီလေ။ ပိုက်ဆံရယင် အကုန်လုပ်မည့် လူတန်းစားထဲ ပါသွားပြီ။May Nwe ကျက်သရေတုန်းလိုက်တာ....:(Gipsy Moe Tein ကုလားတွေကို အဲလောက်ချစ်နေရင်လဲ မင်းတို့ဘီဘီစီမှာ ခေါ်ပြီး အလုပ်ခန့်ထားပေးလိုက်ကြလေ မြန်မာနိုင်ငံထဲ အတင်းထိုးမထည့်နဲ့ ပိုက်ဆံရတိုင်းBurma Muckraker အမျိုး၊ ဘာသာ ၊ သာသနာ အတွက် မို့BBC ကတောင်း ပန် တဲ့ အထိ တိုက်ပွဲ ၀င်ကြ။ အလျှော့ မပေးကြ နဲ့ ။ မနေ့က ယူရို ဇုန် ကယ်ဆယ်ရေး ညလုံးပေါက် ဆွေးနွေး ပွဲ ရလာဒ် တွေ အရ ဗြိတိသျှ အစိုးရ က ဘတ်ဂျက် အကြီး အကျယ် ဖြတ် တောက် လိမ်မယ်။ BBC Burmese လည်း ဒီနှစ်ပါမယ်။မနှစ်က ဒေါ်စု ကယ်ထား လို့ ။ Burma Muckraker မြေမြို ၍ လူမျိုး မပျောက် ဘီဘီစီ မြို မှ လူမျိုး ပျောက် မည်။Thu Rein Phoo BBC, don't abuse our Nation. BBC မှာလုပ်နေတဲ့မြန်မာတွေအစါး ရှက်မိပါတယ်Chris Soe BBC.. shame on you.. you are suchadisgrace... shame on you... all Burmese people hate you more than Than Shwe... you'd better change your name to BBC Rohingya Service.. You shameless people... Zaw Myo လူကြီးလူကောင်း အဖွဲ့အစည်းကောင်း တို့မည်သည်မှာ ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို ကိုယ် တသွေမလွဲ တာဝန်ယူ၏။။။။။။။Felix Phyo Wai Thaw သမိုင်းကိုထိခိုက်လာတဲ့ အထိ မှားတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အတွက် အငြင်းပွားမှုအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ စကားလုံးသုံးစွဲမှုအတွက် ခင်ဗျားတို့ တာဝန်ယူပါ။Khaing Minko BBC ၀ိုင်းတော်သားတွေ လေပန်းလာတာ ဘယ်နှနှစ်ကြာပြီလဲ ပန်းနေတဲ့လေက ဘယ်မှာအကျိုးရှိလို့လဲ မြန်မာပြည်ကို BBC ကိုဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်လို့လဲ BBC ၀ိုင်းတော်သားတွေနေ့တိုင်းအော်နေတော့ မြန်မာပြည်က ဘာတွေတိုးတက်နေလို့ လဲ BBC၀ိုင်းတော်သားတွေ မြန်ပြည်သူတွေမပေါ်မှာ သွေးမကွဲစေချင်တဲ့စိတ်ဓါတ် ရှိကြရင် ဒီရို့ဟင်ဂျာကိစ္စကို အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးကြပါ။Yin Moore T မြန်မာ့သမိုင်းအမှန်ကိုလေ့လာချင်သူများအတွက်။ အထူးသဖြင့်ဘီဘီဆီမှာလုပ်နေတဲ့ ပညာမဲ့လူတန်းစားတရပ်အတွက် အမှတ်တရလက်ဆောင်မွန်ဖြစ်မှာပါ။ BBC မှာပြည်သူတွေကလာတင်သွားတဲ့ links တွေကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ရောင်းစားရတယ်လို့ ကြားတောင်မကြားဖူးဘူး။ Sal Ween bbc မှာ ကုလားတွေကြီးစိုးနေပါဘီ။ ကုလားတွေက ဘင်္ဂါလီတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးတာ မဆန်းပါဘူး။ တလောက မျိုးသာထက်ဆိုတဲ့ သတင်းထောက် ကုလားပုံဖမ်း ကုလားမင်းသား ဒီဇိုင်းနဲ့ မြန်မာပြည်က နာမည်ကျော် လက်မရွံ့လူသတ်သမားတွေနဲ့ တပြုံးပြုံး ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံ နေလိုက်တာများ သိသာလှပါတယ်.. bbc မြန်မာပိုင်းနဲ့ သိန်းစိန်အစိုးရ ပေါင်းစားနေပြီဆိုတာ။ Khaing Minko မြန်မာ့သမိုင်းကိုလိမ်တာ ရိုဟင်ဂျာက သူတို့လူမျိုးအတွက်လိမ်တာပါ BBC ကတော့ သူတို့မိသားစုဝမ်းရေအတွက်ကွ ...Sal Ween ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဘင်္ဂါလီကောင်တွေကို မဲရေ၇းအတွက် အောင်သောင်းကပေါင်း.. လာဘ်စားတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး၊ လ၀က တွေက မှတ်ပုံတင်ပေးနဲ့ ဗမာပြည်ကြီးကိုရောင်းစားခဲ့ကြတာ အခု ဘီဘီစီကုလားတွေကပါပေါင်းပြီး ငါတို့တိုင်းပြည်ကုိူလုပ်ကြံနေကြပြီ။ ကမ္ဘာမကြေဘူးကွ ဘီဘီစီ။ ငလိမ်တွေ....Khu Daun တွေးကြည့်ရင်သူတို့ တွေကိုအသံနာလွန်းလို့ ဗျာ... ပြီးတော့.. ကြွားလုံးဝါးလုံတွေပြောနှင့် ပြည်သူတွေဝါကြွားပြန်တယ်... သူတို့ တွေဟာ ရုံးတက်ရင် မြန်မာအ၀တ်အစားဝတ်ပြီးရုံးတက်ကြောင်း.. မြန်မာဂုဏ်ကိုဆောင်ကြောင်း.. မြန်မာထမင်းကိုစုစားရတာ ဘယ်လိုအရာတွေ့ ကြောင်း..စသည်ဖြင့် အမျိုးချစ်ကြောင်းမိတ်ကပ်လိမ်းသလိုအလှပြပြောပြီး... အခုအဖြစ်က သူတို့ တွေမိတ်ကပ်လိမ်းပြောသောမျိုးချစ်စကားဟာ...မိန့်မပျက်ပါးပေါ်မှ..မိတ်ကပ်နှင့်အတူတူဘဲ။James Mmt ဂုဏ်သိက္ခာကင်းမဲ့တဲ့ BBC News နှင့် BBC Burmese တို့ ပူးပေါင်းလိမ်လည်တဲ့လုပ်ရပ်ကို ဒီပုံမှာ အထင်းသားတွေ့နိုင်တယ်... ပထမဆုံးပုံမှာ Anna Jones ရဲ့ Bleak outlook for Burma's ethnic groups ဆောင်းပါးကို တင်ထားတဲ့ ရက်စွဲ 06 November 2010 ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်.... အားလုံး ၀ိုင်းပြီး Complain တင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ၊ ဒုတိယပုံမှာတော့ 18 November 2010 နဲ့ Who are Burma's minority groups ဆိုပြီးတော့ မြေပုံကို ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြန်ပြင်လာပီး တင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်... တတိယပုံမှာတော့ Anna Jones ရဲ့ ဆောင်းပါးမှာ မြေပုံကို 27 October 2011 မှာ အချို့အချက်တွေ ပြင်စရာရှိလို့ဆိုပြီး မြေပုံကိုဖယ်ထုတ်ထားပြီး အသစ်ပြင်ထားတဲ့ မြေပုံကို ပြန်အစားထိုးထားတယ်လို့ ရေးထားတယ်... 28 October 2011 မှာပြင်တဲ့ မြေပုံဟာ 18 November 2010 မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရေးသူမဲ့ သတင်းထဲမှာ ဘာလို့ပြင်ပီးသားဖြစ်နေလဲ ရှေ့နောက်မညီတာ မရှက်ဘူးလား... နောက်ပီးတော့ BBC ကပြန်ရေးလာတဲ့ စာထဲမှာလည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကို ဖယ်ရှားချန်ထားပြီး ရိုဟင်ဂျာကို ရခိုင်ပြည်ရဲ့လူမျိုးလို့ ဆိုလိုရင်းမဟုတ်ဆိုပီးတော့ Rohingya to Arakan state was not intended to imply ownership of the state or to marginalise the Rakhine people, but simply to show readers the state in which the Rohingya live. ဆိုပြီးရေးထားတယ်.... ဒါပေမဲ့ Anna Jones ရဲ့ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ထားတဲ့ပုံနဲ့ စာသားတွေနဲ့ လုံးဝလိုက်ဖက်မှုမရှိကတည်းက ကမန်းကတန်း လုပ်ကြံပြီး ပြန်ပြင်ထားတာ တအားသိသာတယ်... ဘီဘီစီ အရှက်မရှိသလို ဘီဘီစီမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ မြန်မာဝန်ထမ်းတွေလည်း ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို အမျိုးသားရေး စိတ်ဓါတ်ကင်းမဲ့ပြီး တာဝန်မဲ့ငြိမ်နေကတည်းက ကပ်ဖားရပ်ဖား ခံယူချက်မရှိတဲ့ သာရာစားတွေမှန်း တအားသိသာတယ်.... ရွံဖို့ကောင်းတယ်....Thaung Htike Aung BBC မြန်မာပိုင်းအစီစဉ်မှာ..လုပ်နေကြတဲ့ staff တွေလဲ..မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေဆိုခုကိတ်စကို..ဆတ်ဆတ်ထိမခံနိုင်အောင်..နာသင့်ပါတယ်.. ခင်ဗျားတို့ရနေတဲ့..ဒေါ်လာမျက်နှာထောက်ပီး..မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင်တော့..မပြောတတ်ဘူး.. ကိုယ်အတွက်မတွေးတောင် ကိုယ့် Generation အတွက်တော့..တွေးဗျ..ဒါက..လူကို.လူမျို..မဲ့ကိန်း.. WTF :angryChris Soe : BBC လိမ်နေသည်... BBC ညာနေသည်....BBC အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုဖြတ်ဆီးနေသည်... BBC မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို ရိုဟင်ဂျာကလားဇက် သွင်းနေသည် ....KoThar Gyi haha,BBC is blocki me...............shame on youKo Tun : BBC ..... ကအထီး/အမတွေ မြန်မာပြည်ကို ချစ်ယင် မင်းတုိ့ရဲ့ ငွေမျက်နှာကြည့်တဲ့ လုပ်ရပ် ချက်ချင်းရပ်ပါ။ မြန်မာပြည်သူ/သားအားလုံးကို တရားဝင် တောင်းပန်ပါ။ မင်းတို့ရဲ့ website page မှာ English လိုရေးပြီး ကမ္ဘာသိအောင် တရားဝင်ပြန်တောင်းပန်ပါ။Ko Tun မင်းတုိ့ရဲ့ ပထွေး/လင် ရိုဟင်ဂျာ တွေရဲ့ မရှိတဲ့ သမိုင်းကို ရှာကြံရေးမနေနဲ့။ ပါးစပ်နဲ့ပြောပြီး စာနဲ့ ရေးတိုင်း သမိုင်းမဟုတ်ဘူး။ ခိုင်လုံတဲ့ သက်မဲ့ အထောက်အထား များများ ပြနိုင်မှ လူမျိုးသမိုင်းလို့ခေါ်တာ။ အခုတော့ မင်းတို့ ကပိုက်ဆံ ၁ ခုထဲ ကြည့်ပြီး ရိုဟင်ဂျာ ကိုနေရာပေးနေတာ။Pawtun Zaw : ရိုဟင်ဂျာကို မြန်မာပြည်မြေပုံ ပေါ်မှာ အညွန်းတပ်ပြီးတော့ တင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး..... ဆောက်ရမ်းတင်းတယ်....Thein T Htay : နောက်ဆုံးတော့ ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီ .. စောက်ဆံ မက်တဲ့ ဆောက်ရူးများ...အရက် သမား ဟုတ်တယ်စောက်ဆံလိုချင်ကြလား.....ဒီလောက်တောင်.........Thantzin Win : BBC ကို ကန့်ကွက်တယ်။ ဒို့နိုင်ငံကို ဘင်းဂလား ဇာတ်သွင်းပီး ဖျက်ဆီးချင်တာ။ တခြားအကြောင်းအရာတွေများကြီးရှိပါရဲ့နဲ့ ကုလားတွေက မင်းတို့ပထွေးမို့လို့လား။Zaw Win Htun : ဘီဘီစီရဲ့ အားနည်းချက်ကို သတင်းဌာနကြီးအနေနဲ့ လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ အနေအ ထားပါ။ ပြန်ကြားလာတဲ့ စာတွေ အရ ဘီဘီစီ ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို သေချာသိပုံမပေါ်ပဲ လူမျိုးတွေအကြားက တိုက်ပွဲပုံစံလိုမျိုး ထင်မြင်ချက်ပေးထားပုံပါပဲ။ ဒါကတော့ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းက လူတွေ တာဝန်ရှိပါတယ်။ သတိပြုရမှာက ဒီကိစ္စတွေကို လုံးပမ်းနေရင်း မူရင်းတိုက်ပွဲတွေကို မေ့မသွားဖို့ပါပဲ။Nyan Wint Aung BBC လိမ်နေသည်... BBC ညာနေသည်....BBC အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုဖြတ်ဆီးနေသည်..Burma Muckraker : ၁၉၉၈ခုနှစ်လောက်ကBBCမြန်မာပိုင်း ဦးလေးကြီးဦးဖေသန်းရဲ့မေးပါးများ စကားရ အစီအစဉ် မှာ "မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ် တွေက အသေသာခံ သွားမယ်ပြည်သူ့ ဆန္ဒသွေးဆေး မစားဘူး " (ပြည်သူ ဆန္ဒ ကို မလိုက် လျှောဘူး ) လို့သရော် သွားတယ်။ အခု BBC လဲ ဒီအတိုင်းဖြစ်နေပြီ။June Da Ha BBC ကို သပိတ်မှောက်ပါသည်....bbc မှာလုပ်နေကြတဲ့ ရခိုင်သားတွေ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ..ဝါအရင့်ဆုံး ဦးအောင်ကျော်ဇံ ခင်ဗျားကြီး ကိုယ့်ဇာတိမွေးရပ်ကို ရိုဟင်ဂျာတွေကို ရောင်းစား ထားလိုက်လို့ ငြိမ်နေတာလား..လူမျိုးနဲ့ဘာသာတရားကို စော်ကားရင်ဘယ်ကောင်မှအရှင်မထားချင်လောက်မုန်းတယ်နော်..ရခိုင်သားတွေ အမျိုးကိုချစ်တယ်ဆို..June Da Ha : စောင့်မနေကြပါနဲ့တော့ BBC ကိုသပိတ်မှောက်ကြပါ....Nang San Hleng BBCမလိုလားရေး ဒို့အရေး။ profileပုံမှာ BBCဆန့်ကျင်တဲ့ပုံတွေကိုတင်ကြပါ။ သူတို့တောင်အဲ့လိုလုပ်နေမှာတော့ BBCဆိုတာမရှိတာပဲကောင်းတယ်။Azure Cloud : ဘီဘီစီ FB မှာ ဓါတ်ပုံတွေနှင့်တင်မရအောင်လုပ်ထားပြီ... အရင်တင်ထားကြတာတွေလဲ ဖြုတ်လိုက်ပြီထင်ပါရဲ့ ... အခု ဒီနေရာက ပြန်တင်ပြီ... ပြည်သူသိအောင်ပြမယ်...။ အမှန်တရားကို ရင်မဆိုင်ရဲတဲ့ ဘီဘီစီ..၊ သူတို့ တွေက အသံလွှင့်ဌာနမှာ တဖက်သတ် သူတို့ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြတဲ့အကျင့်တွေက ဖျောက်မရဘူး..စစ်အာဏာရှင်အကျင့်အတိုင်းဘဲ။ပြီးတော့ မျိုးချစ်စကားပြောကြပြန်သေးတယ်.. ဘီဘီစီမှာ ရုံးတက်ရင်မြန်မာအ၀တ်အစားသာ ၀တ်ဆင်ပြီ မြန်မာဂုဏ်ဆောင်ကာ ရုံးတက်ကြောင်း..မြန်မာထမင်းများကိုသာယူဆောင်လာပြီး စုပေါင်းစားပြီး မြန်မာအရသာခံကြောင်း.... စသည်ဖြင့် စသည်ဖြင့် လေလှိုင်းပေါ်က ကြွားလုံးတွေထုတ်ပြီး..ပြည်သူတွေကို တိုင်းပြည်ချစ်ကြောင်း.. မိတ်ကပ်လိမ်းပြောပြီ ညာကြတယ်..သူတို့ တွေ ပြည်သူတွေ မိတ်ကပ်လိမ်းချစ်ပြကြတဲ့ မိတ်ကပ်အချစ်များဟာ... မိန့် မပျက်ပါးပေါ်မှ မိတ်ကပ်မျိုး ဖြစ်နေကြောင်း အခုဖြစ်ရပ်က သက်သေပြလျှက်ရှိနေတယ်။ အခုမေထားသော မေးခွန်းများဖြေပေးကြပါ.Ashin Visarada ကမ်းပြိုရင် ဗဟိုလည်း ယိုင်နဲ့လာမှာပဲ။ ကမ်းပါးကို မပြိုပြိုအောင် တူးဖြိုသလို လုပ်နေတဲ့ BBC ရဲ့လုပ်ရပ်ကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါ။..
ရိုဟင်ဂျာဟူသည် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည်မှာ ရခိုင်စကား လွင့်ဂျာက ဖြစ်လာသော စကားဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက် ဦးတည်ချက်မရှိပဲ လွင့်နေသော မည်သူ့ကိုမဆို ရခိုင်ဘာသာ စကားနှင့် လွင့်ဂျာဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ဥပမာ။ ။သစ်ပင်များက သစ်ရွက်များကြွေလျှင် လေထဲ၌ ၀ဲပြီး ဦးတည်ရာမဲ့ လွင့်နေတာကို ဆိုလိုသည်။ဘာသာဗေဒနှင့် ဆန်းစစ်ကြည့်လျှင် လွင့်ဂျာမှ ရိုဟင်ဂျာဟု ပြောင်းလဲလာသည်ဟု ဆိုနိုင်ပေသည်။ (ရခိုင်-မြန်မာ ပညာရှိကြီး ဦးသာထွန်း) ဘင်္ဂလီ အေဒီ ၁၄၀၄-ခု လေးမြို့ခေတ်၌ မင်းစောမွန် ဘုရင်လက်ထက် ရခိုင့်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်ကို ဗမာဘုရင်သိမ်းပိုက်သဖြင့် ရခိုင်ဘုရင် မင်းစောမွန်သည် ဘင်္ဂလားဒေသရှိ ဂေါလ်ဒေသသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရသည်။ ဂေါလ်ကကောင်း မွန်စွာ လက်ခံခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဂေါလ် ဆူလတန်ဘုရင်၏ အကူအညီဖြင့် ရခိုင်ထီးနန်းကို အရယူခဲ့ရသည်။ အေဒီ ၁၄၃၀-တွင် မြောက်ဦးမြို့တည်၍ မြောက်ဦးခေတ်ကို စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ မြောက်ဦးခေတ်တွင် ရခိုင့် တပ်မတော်၌ အာရပ်မှစစ်သည်တော်များ၊ ဥရောပမှ ပေါ်တူဂီများနှင့် ဂျပန်တို့ပါအမှုတော်တမ်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရ သည်။ ယင်းအာရပ်မှစစ်သည်တော် မျိုးဆက်အများစုမှာ သံတွဲ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်းနှင့် မြောက်ဦးမြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ယင်းတို့ကိုရခိုင်တို့က ကမန်ဟု ခေါ်ဝေါ်ပြီး ရခိုင်ပြည်၌ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုအဖြစ် အသိ အမှတ်ပြုထားပါသည်။ ယင်းမူဆလင် ဘာသာဝင် ကမန်လူမျိုးတို့သည် ရခိုင်ပြည်၌ ပြဿနာဖန်တီးခြင်း၊ ရခိုင်တို့နှင့် ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း၊ လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်း ဖန်တီးခြင်းမျိုးကို လုံးဝပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ရခိုင်ပြည်နှင့်ရခိုင် လူမျိုး အပေါ် သစ္စာရှိရှိဖြင့် ရခိုင်တို့နှင့် အေးအတူ ပူအမျှ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်လာခဲ့ကြသောလူမျိုး တမျိုးဖြစ်သော ကြောင့် ရခိုင်ပြည်၌ ဤကဲ့သို့ မူဆလင် ဘာသာကိုးကွယ်သော ရခိုင်တိုင်းရင်းသား ကမန်လူမျိုး ရှိသည်ကိုပင်သတိပြု မိကြဖူးမည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော် မိမိကိုမိမိ ရိုဟင်ဂျာဟု ကြွေးကြော်နေသူများမှာ ၁၈၂၅-နောက်ပိုင်း ရခိုင်ကို အင်္ဂလိပ်တို့ သိမ်းပိုက်ပြီးမှ ၀င်ရောက်လာသော မူဆလင်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် စစ်တကောင်းတောင်းတန်းနေ ဘင်္ဂါလီများသာ ဖြစ်သည်။ ရခိုင်လူမျိုးများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း ၁၈၂၅-တွင် ရခိုင်ပြည်၌ မူဆလင်ဦးရေ ၃၀,၀၀၀ ရှိခဲ့ရာမှ ၁၉၃၀ ပြည့်တွင် ၂၁၇၈၀၀-ရှိခဲ့ရာ ဗြိတိသျှအစိုးရက မူဆလင်ဦးရေ တိုးလာမှုကိစ္စကို စိုးရိမ်လာသောကြောင့် အခြေအနေစုံစမ်းရန် ၁၉၃၉ ၌ စုံစမ်းရေးကော်မရှင် တစ်ခု ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။ ကော်မရှင်က မူဆလင်ဦးရေ အတားအဆီးမရှိ တိုးဝင်လာမှုကို မဟန့်တားပါက နောင်အခါ၌ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အစီရင်ခံခဲ့သော်လည်း ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြောင့် မည်သို့မျှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေ။ အစီရင်ခံသည့် အတိုင်းပင် ၁၉၄၂-တွင် ကုလား-ရခိုင်အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ မောင်တောမြို့နယ်ရှိ ရခိုင်ရွာအားလုံး ဖျက်ဆီးခံရသည်။ ရခိုင်တစ်ချို့မှာ ပြည်တွင်းသို့ဝင်ပြီး၊ တစ်ချို့မှာ အင်္ဂလိပ်ပိုင်နက် ဒိန်နာဂ်ျပူသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရသည်။ ဘင်္ဂလီ တို့ ရိုဟင်ဂျာ လုပ်ပြီ ၁၉၄၂-ဂျပန်များဝင်လာသောအခါ ရခိုင်များကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သော ကုလားအဖွဲ့သည် ဘာသာရေးအသွင်ပြောင်းကာ ဂျမေယာတူ အိုလမာအသင်း ဖွဲ့စည်းကြသည်။ အဖွဲ့ဥက္ကဌမှာ အုံမော်မျာ (ဘီအေဘီအယ်လ်) ဖြစ်သည်။ အုံမော်များ အဖွဲ့သည် အနောက် ပါကစ္စတန်မှ အော်လနာမူဟာမတ် မူဇဟတ်ခန်နှင့် မော်နာအီဗြာဟိန်း တို့ကိုခေါ်၍ မူဂျာဟိန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကြသည်။ ပါကစ္စတန်နယ်သို့ ရခိုင်ပြည်ထည့်သွင်းရေး အစီစဉ်ပင်ဖြစ်သည်။ စစ်ရေးအရ မြန်မာစစ်တပ်နှင့် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော မူဂျာဟိန်းတို့သည် အခြား တိုင်းရင်းသားများ နည်းတူ အခွင့်အရေးရလို၍ မစ္စတာဂေါ်ဖားက ရိုဟင်ဂျာဟူသော လူမျိုးသစ်တခုကို ၁၉၅၀- စက်တင်ဘာလထုတ် ဂါဒီးယန်းသတင်းစာတွင် အသက်သွင်းခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်ကိုသိမ်းလိုသော ကုလားဆိုးများ သို့သော် ၁၉၅၁- ဇွန်လတွင်ကျင်းပခဲ့သော အလယ်သံကျော် မူဆလင်ညီလာခံကမူ ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်ဘဲ ဗမာ မူဆလင် ကဲ့သို့ ရခိုင်မူဆလင်လူမျိုးဟု ခေါ်ဝေါ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရခိုင်တို့က ငါတို့ရခိုင်တွင် မူဆလင် ဘာသာဝင် မရှိဟု ပြောလာကြသောအခါ ရိုဟင်ဂျာဘက်သို့ ဖောက်ထွက်ရန် ထွက်ပေါက်ရှာလာကြသည်။ ၁၉၆၀-ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရိုဟင်ဂျာသတင်းစာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရိုဟင်ဂျာ ကျောင်းသားအသင်းထိ လှုပ်ရှားလာခဲ့ကြသည်။၁၃၊ ၅၊ ၈၈ - နေ့က မောင်တောမြို့နယ်တွင် အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းသော ကုလားလှုပ်ရှားမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ကုလား ၅၀၀၀၀-ခန့်သည် မောင်တောမြို့ကို အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှ ၀ိုင်းပြီး ဟစ်အော်ကြွေးကြော် မီးရှို့သတ်ဖြတ် ရန် ချီတက်လာခဲ့ကြသည်။ လှုပ်ရှားမှုမှာ ညနေရှစ်နာရီခွဲမှ နောက် တနေ့နံနက် ၃-နာရီခွဲအထိ ကြာခဲ့သည်။ သူတို့ ဘာသာစကားဖြင့် ဘုရားသခင် အလိုကျ တိုက်ပွဲဝင်ကြ၊ မင်းတို့ တိုင်းပြည် ငါတို့တိုင်းပြည် ဖြစ်ရမည်ဟူ၍ ဟစ်အော်ကြသည်။ မြန်မာပြည်ရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ သတိပြုဖွယ် ၁၉၄၂ မတိုင်မှီက မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း တည်ရှိခဲ့သော ရခိုင်ရွာပေါင်း ၁၉၅-ရွာမှာ ၁၉၉၂ တွင် ၄၆ ရွာသာ ကျန်ရှိပါတော့သည်။ ကျန်ရွာများအား မူဆလင်များက လူဦးရေအသာစီးရမှုဖြင့် သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤသည်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူများပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းအကျဉ်းဖြစ်သည်။ ဒေါက်တာအေးကျော် (ရခိုင်)၏ ပြောပြချက် ကိုလိုနီခေတ်တွင် ဘင်္ဂါလီများသည် ရခိုင်ပြည်တွင် စပါးရိတ်၊ လယ်ထွန် အလုပ်လာလုပ်ပြီး ပြန်သွားကြသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ဦးနု၏ ဖဆပလ ခေတ်တွင် ရခိုင်ပြည်၌ အဓိက လွှမ်းမိုးသော ပါတီကြီးနှစ်ခုရှိသည်။ ဖဆပလနှင့် ရတည (ရခိုင် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ပါတီ)တို့ ဖြစ်သည်။ ရတည၏ ခေါင်းဆောင်သည် ဦးကျော်မင်းဖြစ်သည်။ သန့် ရှင်း ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့် ဦးနုသည် တိုင်းပြည်၏ အကျိုးထက် သူ့ပါတီအကျိုးကို ကြည့်သည့်အနေဖြင့် မေယုခရိုင်ကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ မေယုခရိုင်အတွင်းသို့ ဘင်္ဂါလီ များအား ၀င်ခွင့်ပြုပြီး မဲရရှိနိူင်ရန် အတွက် မျက်နှာသာပေး၍ မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ ဦးနု မဲရရန် အတွက် မျက်နှာသာပေးသောအခါ ဘင်္ဂါလီများသည် နိုင်ငံရေးအဆင့်ထိ တိုးတက်လုပ်ဆောင် လာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် ပြဿနာကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရင်း ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ ပေါ်ပေါက်လာရသော နောက်ခံ အကြောင်းတရား ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ အပေါ်ယံ ပြဿနာသာဖြစ်သည်။ အရင်းခံအကြာင်းက “အစ္စလာမ်ဝါဒ လွှမ်းမိုးပြန့်ပွားရေး”ဆိုသော ပြဿနာသာ ဖြစ်သည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှုကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုပေးသည်မှာ အာဖရိကတိုက် မြောက်ပိုင်းမှ တိုင်းပြည်များ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ နိုင်ငံများမှ ငွေကြေး၊ လက်နက် စသဖြင့် လိုအပ်သည်များအား ထုနဲ့ ထည်နဲ့ ပံ့ပိုးပြီး လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့ တောင်အာရှကဆိုရင် မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ဒါကို အားပေးတယ်။ မွတ်စလင် ဘာသာပြန့်ပွားဖို့ လွှမ်းမိုးဖို့ နယ်မြေရရှိစေဖို့ အင်တိုက် အားတိုက် ကူညီတယ်၊ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ရိုဟင်ဂျာအမည် ကို သုံးပြီး မြန်မာတိုင်းရင်းသား၊ ရခိုင်တိုင်းရင်း သား ဖြစ်ဖို့ အားထုတ်လာတယ်၊ တကယ်တော့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ လူမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားလည်း မဟုတ်ဘူး။http://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9F%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%AC မှ ကူးယူဖော်ပြပါကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင် 1950 ခုနှစ်လွန် ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ မူဆလင်တို့ မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင် မြို့နယ်တို့ကို အခြေခံကာ ထကြွခဲ့ဖူးသည်။မူဆလင် ပညာတတ်များက ထိုမြို့ နှစ်မြို့ ကို အခြေခံကာ မူဆလင် ပြည်နယ် ထူထောင်လိုသဖြင့် မူဆလင်လူမျိုးကို မြန်မာ တိုင်းရင်းသား တစ်မျိုးဖြစ်လေဟန် သမိုင်းလိမ်ရေးကာ စာနယ်ဇင်းများတွင် တင်ပြပြီး ထကြွ ပုန်ကန်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘူးသီးတောင် ပါလီမန်အမတ် မစ္စတာဂါဖားရ်က (၁၉၅၀) ခု ဂါဒီယန် သတင်းစာတွင် ရိုဟင်ဂျာဟု ခေါ်သော မူဆလင် လူမျိုးသစ်တစ်မျိုး ရခိုင်ပြည်တွင် ရှေးယခင်ကပင် ရှိခဲ့လေဟန် စတင်လိမ်ညာကာ တင်ပြခဲ့သည်။ (နေရာတစ်နေရာ နယ်ချဲ့လိုသဖြင့် လိမ်ညာခြင်း သက်သက်)သာ ဖြစ်သည်။ အမ်အေ၊ တဟီးလ်ဘာသာ (ဘူးသီးတောင်) ဆိုသူကလည်း ဂါဒီယန် သတင်းစာမှပင် (၁၉၆၀-၆၁) ခုနှစ်များအတွင်း ဆောင်းပါးများ အဆက်မပြတ်ရေးပြီး ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသစ် ရုပ်လုံးပေါ်အောင် ဆေးခြယ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ဖူးသည်။ ထိုသမိုင်းလိမ်များကို အခြေခံလျက် ဂါဖားလ်နှင့် ဘသာတို့၏ သားမြေးများဖြစ်သော မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ စစ်တကောင်းအနွယ်ဝင် ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတို့ အခွင့်ရလျှင် ရသလို ၄င်းတို့ မြေတစ်နေစာ ရရေးအတွက် ဆက်တိုက်လှုပ်ရှားလာခဲ့သည်။ (ပြန်လှန်သူံးသပ်ကြည့်သော် ၄င်း မူဆလင်များသည် ..မြန်မာနိုင်ငံအရေး အရှုပ်အတွေးများနှင့် အပြောင်းအလဲများသည့် စပ်ကူးမတ်ကူးကာလများတွင် ပိုမိုပြီး လှုပ်ရှားခဲ့ကြကာ .. ၄င်းတို့ ခိုးဝင်နေသော တိုင်းပြည်အကြပ်အတည်းကာလတွင် ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်း ကြခြင်းဖြစ်သည်) ၄င်းတို့ လုပ်ရှားမှုများသည် တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရလက်ထပ်တွင် မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ငုတ်လျှိုးသွားပြီး (၁၉၈၈)ခု ဒီမိုကရေစီ အရေးအခင်းတွင် မြေပေါ် လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ခေါင်းထောင်လာပြန်သည်။ မူဆင်လင် ရိုဟင်ဂျာတို့သည် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီကို အရေခြုံပြီး မိမိတို့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးသစ် တရားဝင် ဖြစ်ရေးကို ကမ္ဘာမီဒီယာများမှ တဆင့် ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ကြိုးစားတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် " အမှားကြာလျှင် အမှန်ဖြစ်" ဆိုသော စကားကို အခွင့်ကောင်းယူကာ .. ရိုဟင်ဂျာအမည်ကို .. မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးတစ်မျိုး ဖြစ်လေဟန် ဖန်တီးကာ အခွင့်အရေးပေါင်းစုံ တောင်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ (မြန်မာနိုင်ငံကို အကျိုးယုတ်စေချင်သော မသမာသူ ပြည်ပ မီဒီယာများကလဲ ရိုဟင်ဂျာကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားဟု ၀ါဒဖြန့် လှုံဆော်ပေးခဲ့ကြပြီး ... ယခု ဘီဘီစီ (BBC) သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျိုးရေးရန်သူဖြစ်ကြောင်း ၄င်း၏ လုပ်ရပ်များက သိသာမြင်သာစေခဲ့သည်။) (ဆက်လက်တင်ပြပါမည်) လင်းရောင် by Linn Yaung
ရိုဟင်ဂျာနှင်.ပတ်သတ်၍ မဟုတ်မမှန်သတင်းများ မတင်ရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါသည် (ပေးစာ - ၄၀)
ဒီPage (http://www.facebook.com/bbcburmese) ကိုထည်ထောင်ထားတဲ.သူခင်ဗျာရိုဟင်ဂျာဆိုတာဘာကိုပြောတယ်ဆိုတာကောသိလားရခိုင်မှရှိတဲ.မွတ်(စ်)စလင်ပြောတာပါ။ဘယ်နာ.ကဘင်္ဂါလီကုလားပါလဲ။Wikipediနဲ.wikileadsတွေဖတ်ဟိုဆိုက်ကဟိုဟာတွေဖတ်ပြီးလျှောက်လျှောက်လုပ်မနေပါနဲ.။နောက်တစ်ခုပြောပြဦးမယ်။ခင်ဗျာရဲ.ဆိုဒ်မှာရေးထားတဲ.အနီရောင်စာက(မှတ်ချက်။ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဆန့်ကျင်ရေး Blog မဟုတ်ပါ။)မဟုတ်လားအစ္စလာမ်ဘာသာနဲ.လွတ်ကင်းတာကိုမပါတာပါ။ဒါကတော.အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ.အခြားဘာသာများအကြားရန်တိုက်ပေနေသလိုဖြစ်နေပါပြီ။Wikipediaနဲ.wikileadsမှာတွေ.မြင်တဲ.စာတွေကိုဖတ်ပြီးဟာဒါကအမှန်ကြီးတကယ်ကြီးဆိုပြီးလိုက်ရေးလို.နာမည်ကြီးလာဖို.တော.မရှိပါဘူးအမုန်းများလာဖို.ဘဲရှိလာမှာပါ။မိမိတို.အစ္စလာမ်ဘာသာမှာမည်သူကိုဒူတ်ခပေးလိုက်လို.AntiROHINGYAဆိုပြီးထောင်လိုက်တာလဲ။နောက်1ခုပြောရမှကအလ်ကိုင်ဒါအဖွဲ.နဲ.ဆက်သွယ်နေတယ်တဲ.ရိုဟင်ဂျာတွေကဒါဆိုရင်အလ်ကိုင်ဒါးအဖွဲ.မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်နေမှာပေါ.ဗျာ။Worldမှာခေတ်မှိတိုးတက်ဆုံးဆိုတဲ.အမေရီကန်လိုမျိုးနိုင်ငံထဲကိုဝင်ပြီးworld trade center တောင်ဖြိုသွားတာပါ။လေယာဉ်ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီး4လက်မရှိတဲ.ဓားလေးနဲ.သာပြန်ပေးဆွဲသွားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကိုအလ်ကိုင်ဒါးအဖွဲ.ကောင်1ယောက်ထဲလွတ်ကြည်.လိုက်ပါလား?။လူများဘာသာရေးကိုစော်ကားပြီးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကောလဟာလသတင်းများကိုနှားမထောင်းဖို.တိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီPageကိုဖျက်ပါလို.တိုက်တွန်းပါတယ်။ဆိုဒ်ကိုပါဖျက်ပါလို.တိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာသာရေးအကြားအမုန်းမဖြစ်ပွားလို.သာဒီလိုတင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အကယ်ရ်ုကျွန်တော်ပြောသောစကားအားမယုံပါကThe Best world news center aljazeera newsကိုတာသွားမေးလိုက်ပါ။သတင်းအမှားများဆက်မတင်သွင်းပါရန်။နောက်ဖြစ်လာမည်.ပြသနာများမှာကြီးမားလာနိုင်ပါသည်။ဧရာဝတိသတင်းငှာနမှလည်းသတင်းအမှားကိုတာဖော်ပြခဲ.ကြောင်းလည်းဆက်လက်ပြောကြားလိုက်ပါဦးမည်။ကျေးဇူးပြုရ်ုသတင်းအမှန်များကိုတင်လိုပါကစေ.စေ.စပ်စပ်သိရှိပြီးမှတင်ပါရန်(အလ်ဂျဇိယားတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦး)
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11595983ဘီဘီစီ (BBC) နှင့် သတင်းထောက် Anna Jones တို့ဟာ တာဝန်မဲ့စွာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမျိုးစာရင်းကို တလွဲပြုစုခဲ့ပါတယ်... ဒါတွေဟာ သမိုင်းကျောင်းကို ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဖြစ်စေတဲ့အတွက် လုံးဝကို ကန့်ကွက်ပါတယ်......အားလုံးသော အမျိုးချစ်သူများလည်း http://www.facebook.com/bbcburmese မှာ သွားရောက် ကန့်ကွက်ပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်.... Anna Jones ရဲ့ မူရင်းဆောင်းပါးကိုတော့ ဒီ http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11595983 မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်... ဘီဘီစီလို သိက္ခာရှိ သတင်းဌာနအနေနဲ့ ဒီလို လွဲမှားနေတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို စီစစ်မှုမရှိပဲ ထုတ်လွှင့်တဲ့အတွက် ဖြေရှင်းမှု တစ်ခုခု ထုတ်ပြန်သင့်ပါတယ်.....ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုလည်း စာနာသင့်ပါတယ်.... ဘူးသီးတောင် မောင်တောမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့ လူမသိ သူမသိ ပြစ်မှုတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်စေချင်ပါတယ်....ထောက်ပံ့ငွေရဖို့ မတရားနည်းလမ်းနဲ့ ပိုက်ဆံရဖို့အတွက် Monkey Business ပြလုပ်တဲ့ Anna Jone ကိုလည်း အပြင်းအထန် ရှုံချပါတယ်..... ရခိုင်လူမျိုးများက ဗုဒ္စဘာသာဝင်တွေပါ။ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကိုအဲ့ဒီကနေသယ်လာကတည်းရှင်းပါတယ်။ BBC မှာလုပ်ကိုင်သွားတဲ့ မြန်မာတွေထဲမှာလည်းရခိုင်လူမျိုးတွေပါပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စလေးက သေးသေးလေးဆိုတဲ့အကြောင်းချစ်ရာပေမဲ့ အခုအနေ အထားက ခေါင်းလေးဝင်ပါရစေ၊ ကိုယ်လေးဝင်ပါရစေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ အနေအထားကို ချိုးနင်းလိုက်တဲ့ အပြုအမှုပါဘဲ။ ဒါကို BBC အနေနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် မကြည့်ဘဲ ၊မတွက်ဘဲ သတင်း တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပြတဲ့ အနေအထားနဲ့ဆိုအုံး ကျွန်တော်တို့ ကန့် ကွက်ပါတယ်။ ကြီးမားသော ပြဿနာကို ထောင်ပေးသော၊ အက်ကြောင်းပေးသော အနေအထားကို လုပ်ဆောင်သည့် သတင်းဌာနအဖြစ်ကိုတော့ မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ ဒီရိုဟင်ဂျာကိစ္စ ထိုင်းမှာပေါ်လာကတည်း ဒီလိုပြဿနာတွေတက်လာတော့ မယ်ဆိုတာကိုသိလို့ ဝိုင်းတားကြတဲ့သူတွေများပါတယ်။ ဒါကို အသီးသီးသော အဖွဲ့ အစည်းပေါင်းစုံက ၀ိုင်းပြီးတော့ တံဆိပ်ကပ်ကြပါတယ်။ သတင်းဌာနတွေကိုယ်တိုင် လူအခွင့်အရေးဆိုတာကိုဇောင်းပေးပြီးတော့တင်လိုက် ကြ တာနောက်ဆုံး နိုင်ငံတာကာအစည်းဝေးတွေ၊ အာဆီယံတွေထိကိုသောသောညံ့သွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်နဲ့ ဘယ်လိုသောအနေအထားတွေကြောင့်လုပ်ကြတယ် ဆိုတာတော့ Lobby လုပ်သူတွေ ဘဲသိမှာပါ ၊ နိုင်ငံရေး ထိုးနှက်ချက်အကြောင်းကြီးကို ရှိနေပါတယ်။ နောက်ဆုူံး ဦးဥာဏ်ဝင်း အာဆီယံ မှာ ဘင်္ဂလီတွေဆိုပြီး လက်ညိူး ထိုူးမှအားလုံးက ဘင်္ဂလီဆိုတာကိုတော့ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် လိုက်သုံးထွက် လာရ တဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒီအစ်ရှုးက မသေးပါဘူး။. အခုနောက်တကြိမ်ထပ်ပြီးတကျော့ပြန်ဝင်လာပါတယ်။ အကြောင်းတွေဆက်စပ်ပြီးတော့ ကြည့်ရင်တော့ သိပ်မကောင်းဘူး ဆိုတော့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘယ်လောက် ချိလိုက်မလည်း စဉ်းစားပါ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် နီးပါး ကြံကြံခံပြီးတော့ ဘာသာမတူ ဘင်္ဂလားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ သွေးမ နှောခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေပါ၊ ဒီအတွက် မိမိတင်ပြသော သတင်းသည် ကိုယ်ဘက်ကိုဘယ်လောက်ထိ ကြီးမားသော ရိုက်ခိုက်မှုဖြစ်လာတာကို တွက်ဆကြည့်စေချင်ပါသည်။-မီဒီယာတွေမှာ အမှားတွေတင်ပြတာကို ထုတ်ဖော်ပါ။ ကန့်ကွက်စာတွေ သိန်းသောင်းချီအောင် ဘီဘီစီဆီပို့ပါ။ ထိရောက်တဲ့ အထက်လူကြီးတွေဆီ (အောက်က ဌာနမှုးတွေဆီ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က ဘာပါဝါမှ ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ ခေါင်းညိမ့်ရသူတွေဘဲဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ဌာနအားလုံးကို ထိန်းချုပ်သူတွေ၊ ဒါရိုက်တာတွေဆီ၊ ဗြိတိလျှနိုင်ငံခြားရေးဌာန ဝန်ကြီးဆီ) တိုက်ရိုက် ကန့်ကွက်စာတွေ ပို့ကြပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်က်မှာလည်းတင်ပါ။ ကန့်ကွက်စာတွေထဲမှာ လူမျိုးဘာသာထိခိုက်တာတွေတော့ ယဉ်ကျေးစွာဖြင့် မထဲ့ထားပါနဲ့။ ဒီမြေပုံဆွဲသူ အချက်အလက်ပေးသူက နှစ်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာက နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေကို မထည့်ထားတာကို အဓိကထား ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ထောက်ပြပါ။ ဘီဘီစီကို ချက်ခြင်းတောင်းပန်ခိုင်းပါ။ မြေပုံသုံးတဲ့ ဆောင်းပါရှင်ကော၊ နောက်ကကြိုးဆွဲသူ တမင်တကာ အချက်အလက်မှားပေးသူ မြန်မာပြည်က လာသူတွေဆိုတဲ့ လူတွေကိုလည်း ချက်ခြင်း အလုပ်ထုတ်ပြစ်ဖို့ ပြင်းပြင်း ထန်ထန်တောင်းဆိုကြပါ။ နောင်ကို ဒီလို လက်လွတ်စပယ်လုပ်တာမျိုး သမိုင်းမှားလုပ်တာမျိုး မလုပ်အောင် လုပ်ကြပါ။ ပြည်ထဲက ရခိုင်အမျိုးသားတွေကိုလည်း ဒီမြေပုံကို ပြပါ။ ပြည်ပက လူတချို့ ဘယ်လောက် ယုတ်မာနေကြသလည်းဆိုတာ သိအောင်ပါ။ ရခိုင်ပြည်မှာ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ နေနေကြတဲ့ လူမျိုးမတူတူ ဘာသာမတူတူ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ် အဓိကရုန်းဖြစ်အောင်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့။ ကိုယ်က ယဉ်ကျေးတယ်။ နိင်ငံသားကောင်း ပီသတာကိုပြပါ။ ရခိုင်ပြည်သူ ပြည်သား တွေကို သူတိ့ရဲ့ သမိုင်းကို ဒီဆောင်းပါးရှင် အနောက်နိုင်ငံသား မိန်းမလို လူတွေ၊ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ ဆိုတဲ့ မီဒီယာသမားတစ်ချို့က ဘယ်လိုဖျောက်နေတာကိုဘာ အဓိကထားပြီး အသိပေးကြပါ။ ပြီးဒီဖြစ်ပြက်ခဲ့တာကိုလည်း မကြာမကြာ ပြန်တင်ပြပါ။ မဟုတ်တရုတ် လုပ်ခဲ့သူတွေကိုလည်း သတက်လုံး ဘယ်သူကမျှ မမေ့အောင် ဆက်လုပ်ရမယ်။ ဒါမှ နောင်ကျဉ်သွားမယ်။ လေးစားစွာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့မှတ်ပုံတင်ဋ္ဌါနက ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးမောင်မောင်သန်းက ဘီဘီစီက မေးတာကို ပြောသွားတဲ့အသံဖိုင်ပါhttp://soundcloud.com/yeyint2011/ummt-bbc-111024-night Credit to - Let's Work , James Mmt , Than Saw ... Rohingyaby သီရိ ဧရာဝတီ
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ် (၄)
Thet Aung ဘာလုပ်မှာ လဲ BBC တာဝန်မဲ့လှချည်လား။May Thu Maythu B BC မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွါးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား ပုဇွန်လိုပဲခေါင်းမှာ ချီးပဲ ရှိတယ်Thet Aung ဘာလုပ်မှာ လဲ BBC တာဝန်မဲ့လှချည်လား။Aung Kyaw Myo Fool BBC & ANNA JONES .... STOP YOUR Fxxxxx ACTIONS ...Wai Hlyan ကွန်မန်းတွေဖက်ပြီး ဖြေလေ ....ဘီဘီစီမှာ..လုပ်နေတဲ့..ဗမာပြည်သား..မျိုးမစစ်တွေရဲ့...ငါလိုမသားတွေ..မင်းတို့ကို မင်းတို့ မြန်မာပြည်သားလို့ မပြောနဲ့....BBC ...မဖြေရှင်းသေးမချင်း....နေ့တိုင်းကွန်းမန်းနဲ့...ဆဲနေမယ်..နှမပေးတွေ..(BBC ဌာနမှ ရှိတဲ့..မြန်မာဝန်ထမ်းအားလုံး)Moe Ma Ka ဘီဘီစီက သည်လိုမျိူးသရုပ်ဖော်ကို ထည့်ရာမှာ လူ၊ နယ်မြေ၊ ဓာတ်ပုံ၊ စာတမ်းများ နဲ့ နယ်မြေ၏ အရောင်များကို အချိန်ယူပြီး ပြင်ဆင်ထည့်သွင်းထားတာတော့ ဟုတ်ပါရဲ့။ အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်အောင် တမင်များ လုပ်ထားသလားလို့ သံသယဖြစ်စေပါတယ်။ ကန့်ကွက်ပါတယ်...။ Nay Wynn Htunn မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှမူဆလင်ကုလားမှန်သမျှအကုန်နှင်ထုပ်၊နှင်ထုပ်မရရင်အသေသတ်။ရခိုင်သွေးချင်းတို့ သွေးစည်းဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။....Moe Myint BBC ကမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာလား၊ ရိုဟင်ဂျာအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာလား၊ မှားနေတာကို ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ငြိမ်ခံနေရလား၊ မင်းတို့ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်ကကောင်တွေက ပိုက်ဆံရရင် မင်းတို့အမေတွေပါ ကုလားတွေဆီ ရောင်းစားမဲ့ ကောင်တွေပါ။ စောက်ဆင့်မရှိ စောက်ရှက်မရှိတဲ့ကောင်တွေပါ၊ မင်းတို့အစားရှက်တယ်ကွာ၊Cherry Aung ရိုဟင်ဂျာကိုမြန်မာတိုင်းရင်းသားလို့ညာပြောတဲ့ဘီဘီစီကိုလုံးဝကန်.ကွက်ပါတယ်။ သေသေချာချာပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးပါ။ ဒါဆိုရင်ဗမာတွေဟာ အင်းဂလိပ်တိုင်းရင်းသားဆိုရင်ရော လက်ခံမှာလား။ စကားကိုပြီးပြီးရောမပြောပါနဲ.။ရွာသားလေး ဖိုးအောင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမြို့တော်ဒါကာဆိုတာအရင်ကငါတို့အပိုင်လေ ရခိုင်ရဲ့တံခါးပေါက်မြို့မိုလို့ဒကားလို့ခေါ်ရင်းကနေဒါကာဖြစ်သွားတာ.... မင်းတို့ပြောသလို..ရိုဟင်ဂျာကမြန်မာလူမျိုးဆိုရင်.. ဒါကာထိကငါတိုမြန်မာပိုင်ခဲ့တာလေ...ပြန်ပေးမလား... .မင်းတို့ပြန်ပေးရင်ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမြန်မာလူမျိူးလို့မဟုတ်လဲသနားသဖြင်းလက်ခံပေးမယ်.. ကာလရှည်လာတော့ ဒါကာဖြစ်သွားတာMratt Kyaw Thu ဒီသတင်းအပေါ်တစ်ခြား ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ Web တွေမှာ ဘာတွေတက်နေလဲ၊ ဘာတွေ ပြောနေကြလဲ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ လပိုင်းအတွင်းက Arakan ဆိုတဲ့နာမည်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့အပေါ်ွRNDP တုန့်ပြန်ခဲ့ဖူးသေးတယ်။Maung Aye ဂုဏ်သရေရှိတဲ့ BBC ဂုဏ်သရေ ရှိရှိ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးစမ်းပါ။ Where is Anna Jones hidding?? we likce She-------------------------။Cho Yee Latt နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအကြောင်းကို ဝေဖန် အားပေး ထောက်ခံ ချင်ရင် သတင်းအချက်အလက်ကိုတော့ တိတိကျကျလေး သယ်ယူပို့ ဆောင်ပေးပါ။ လူတွေရဲ့ အမြင်ကို ကျယ်ပြန့် စေတာ သတင်းထုတ်လွှင့်မှုက အဓိက ကျလို့ ပါ။ နိုင်ငံခြားသား တိုင်းတပါး လူမျိုးတွေက ငါတို့ မြန်မာပြည်အကြောင်းမသိတာ ထားတော့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာစာ မြန်မာ စကားတတ်နေတဲ့ သူတွေက အရီးလေးကို အမေခေါ်ပြီး မြန်မာလူမျိုးချင်းသွေးမခွဲပေးပါနဲ့။ တိုင်းပြည်ဖြစ်စဉ်အမှန် (နိုင်ငံရေး။လူမှုရေး။စီးပွားရေး။ပညာရေး။တိုင်းရင်းသားရေး) ကို ကမ္ဘာကသိအောင်ဖော်ထုတ်ချပြတတ်ပါစေ။ အတင်းချရုံသက်သက်က ကျက်သရေမရှိဘူး။Mratt Kyaw Thu BC ကရခိုင်လူမျိုးတွေ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ။ အပြင်ကလူတွေကတောင် ပြောနေကြတာ။ အထဲမှာနေပြီး ဘယ်သူ့ကိုကြောက်နေကြတာလဲ၊Kyaw Zay Win ဒီ ကိစ္စကို ခင်ဗျားတို့ တာဝန်ယူပြီး သေချာ ရှင်းပေးပါ ဘီဘီစီမှ လူများခင်ဗျာ။ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ပြည်သူတွေက တောင်မထောက်ခံတာ ... ခင်ဗျားတို့က ပြည်သူဘက်ကမရှိပဲ .... ရိုဟင်ဂျာဘက်ကရှိတာလားဗျာ...။ဒီသတင်းကိုမြင်လိုက်တော့ ကျနော် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်....Nickey Myanmar BBC ရေပုံလေးဖြုတ်ပေးယုံနဲ့တော့ရဘူး။ ပြည်သူတရပ်လုံးကိုတရားဝင် တောင်းပန်ပေးပါ။ကိုယ်အမှားကို ကိုယ်ဝန်ခံရဲတာ သတင်းသမားကောင်းတွေ ရဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။ဦး စစ်မင်း ရေးတဲ့ ကွန်မန်တွေ (လုံးဝ မဆဲပါပဲ) ဘာလို့ ဖျက်ပျက်ပါလိမ့်..။ လူအခွင့်အရေးအော်တဲ့ ကမ္ဘာသိ မီဒီယာ ဆိုတာ ဒါလား ?Aung Kyaw Kyaw SHAME ON YOU BBC. Min Thant လူသားချင်းစာနာမှုမရှိဘူးပဲပြောပြော....သနားလို့အိမ်ရှေ့မှာ နေရာပေးထားတဲ့ကုလားက ကိုယ့်နေရာဆိုပြီး အိမ်ရှင်ကို တရားစွဲတဲ့အမှု ကို အကျိုးအမြတ်တစ်ခုမြော်ပြီး သက်သေလိုက်ပေးတဲ့ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်လို ကမ္ဘာကျော်မီဒီယာ တစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်မထားမိဘူး ဘီဘီစီMin Thant BBC ဘာကြောင့်များအဲဒီလိုဖန်တီးခဲ့တာလဲ....စဉ်းစားလို့မရဘူး.....ကျွန်တော့်လို ဗမာစစ်စစ်တောင် ခံစားလို့မရဘူးဗျာ....ကိုဆွေမျိုး မောင်နှမ သားချင်းတွေကို ကုလားလက်ထဲပေးလိုက်ရသလို ခံစားရတယ်.....ဘယ်သမိုင်းကိုပဲကြည့်ကြည့် တိုင်းရင်းသားညီကို မောင်နှမတွေထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာမရှိခဲ့ပါဘူး....Nyi Cell BBC ကအကောင်တွေ သူများ ပါးစပ်မှာ လမ်းဆုံးနေ ကြပြီ. BBC နဲ. မွတ်စလင် တလောက င်္လုး သိထားသင်. တာက ၀ါးမြို ချင်တိုင်း ၇မယ်. ထဲမှာ ၇ခိုင် မပါဘူးNaychiwin Win အလကား မျောက်ပြပြီး ဆန်တောင်းနေတဲ့ သူတောင်းစား အဖွဲ့...Aung Si Thu BBC အမှန်တွေ အများကြီး လွှင့်ခဲ့သလို .. အမှားတွေ အများကြီးလဲ လွှင့်ခဲ့မှာပါ ... ။ သို့သော် .. ဒီတစ်ခါ မှားတာတော့ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး .... ။ ရခိုင်တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် .. မြန်မာကို အမျိုးဖျောက်တာ ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ပါ .. ။Htay Minwai Unqualified BBC , Unreliable BBC , Unbelievable BBC ,Irresponsible BBC , Shameless BBC , Greedy BBC , Stupid BBC , Monkey-Style BBC , Idiot BBC , The worst Media BBC , ..............ဦး စံရှား Stupid BBC!!!!!!!!!!!!Linn Yaung စောက် အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ အမျိုးဖျက် ဘာသာဖျက် သာသနာဖျက် ဘီဘီစီ။ အဲဒီမှာ မင်းတို့ စားနေရတဲ့ ထမင်းတစ်နပ်အတွက် အသက်ကို ဖက်နဲ့ ထုတ်ထားလိုက် ဘီဘီစီ။ ဘီဘီစီမှာ လုပ်နေတဲ့ ကောင်တွေ ည အိပ်ယာဝင်တိုင်း မင်းတို့ ကိုယ် မင်းတို့ မြန်မာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ သတိရပြီးမှ အိပ်လိုက်။ ငါ့ရှေ့မှာ ဘီဘီစီကပါ လာပြောလို့ကတော့ စောက်ခွက်ကို ကတ္တရာလမ်းနဲ့ ပွတ်မယ်။ ရှင်းလား။ Ñaing Myo Õo ရေပိုင်နက်ကိစ္စ ကရှင်းလို့မပြီးသေးဘူး ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဘင်ဂါလီကို ပေးတော့မှာလာ BBCRakha Thandar ရခုိုင်ဒေသ၏ ရခုိုင်လူမျိူးများ နေရာမှာ “ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး” ပုံပြထားတော့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေဝေဖန်ကန့်ကွက်မှု ကြောင့် ယမန်နေ့က ဘီဘီစီဝက်ဆိုက်က အဆိုပါအငြင်းပွားနေသည့် ပုံကို မည်သည့်ဖြေရှင်းချက်မျှ မပြန်ကြားဘဲ ၀က်ဆိုက်မှ ဖြုတ်ချထားသည်..ဘီဘီစီ အနေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ သိက္ခာရှိတဲ့ သတင်းဌာန ဆိုရင် ဒီကိစ္စကို တရားဝင်ပြန်လည် တောင်းပန်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။Ashin Panyin မကျေနပ်သေးဘူးကွာ Arakanese တစ်ယောက်တောင် ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မကြားဖူးဘူး မသိဘူး Anna Jones ဆိုသူက ဘာသိလို့ ဘာအထောက်ထားနဲ့ရေးတာလဲ ဒီလောက်မှားနေတဲ့ သတင်းကိုရေးတဲ့သူ ပုံဆွဲတဲ့သူကို BBC မှာလုံးဝ(လုံးဝ လုံးဝ လုံးဝ) မမြင်ချင်ဘူးကွာ။ ချက်ချင်းထွက်ပေးပါ။ ရခိုင်သမိုင်းများကိုလည်း BBC သတင်းသမားများ အကုန်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။Nay Aung Kyaw Remove Rohingya From Myanmar NOWWWWWWWဦး စစ်မင်း http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11620652မတောင်းပန် တဲ့ အပြင် ထပ်တင်ထားပါသေးကြောင်းZayar Win ကဲဘလိုလဲ BBC တင်တုံးကတော့ တာဝန်မဲ့ စွာတင်ပြီး ခုမှ တောင်းပန်ရကောင်းမှန်းမသိတော့ဘူးလားNang San Hleng BBCကဟာတွေ ပင်းနေတာလား ကန်းနေတာလား လူလိုနားမလည်တာလားတော့မသိဘူး ခုထိကိုမပြင်သေးဘူး။Tin Ko Ko Win ပြည်သူ့စကားကို နားထောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ BBC က တာဝန်ရှိသူတွေ ဘယ်နားမှာ အိပ်ပျော်နေတာလဲ...Nga Tun ထပ်တင်တယ်ကွာ... ၁၉၀၆ ခုနှစ် Akyab (စစ်တွေ) District Gazetter အရ ရခိုင်ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ တိုင်းဦးသားနဲ့ တိုင်းဦးသားမဟုတ်တဲ့ လူဦးရေ စာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ တိုင်းဦးသားလူမျိုးများ (Indigenous Races) - Arakanese (239,649), Burmese (35,751), Kamis (11,595), Mros (10,074), Chins (9,415), Daingnets (3,412), Chaungthas (247) and Thets (232)Tun Lin တာဝန်ရှိပုတ်ကိုယ်များ http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11620652 ဒီလင့်ပါ အချက်အလက်များကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးပါ။ သမိုင်းမှာ တရားခံမဖြစ်ပါစေနဲ့။Soe Paing Phyo လူမျိုလို့ လူမျိုးပျောက်အောင် လုပ်တာလား ဘီဘီစီNga Tun ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊ဗမာ၊မွန်၊ရခိုင်၊ရှမ်းလူမျိုးကြီး၈ခုအပါအ၀င်135မျိုးပဲရှိပါသည်မှတ်ချက်ကုလား(ခုမှသိတဲ့ရိုဟင်ဂျာ)မပါ ပါ..Khaing Kyawt Zan မြန်မာဌာနကလူတွေက ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင် ပါးစပ်ပိတ်နေလဲ။ အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြဖို့ အတွက် တာဝန်မရှိဘူးလား။ ဒီလောက်မိုက်ရိုင်းနေတာ။ အယင်တုန်းက လေးစားခဲ့တဲ့၊ တန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ သတင်းဌာနဟာ ဒီလို ကုလားစုတ်၊ ကုလားနာတွေကြောင့် သူများတံတွေးခွက်ထဲမှာ ပက်လက်မျောခံနေတာလဲ။ ရှင်းပေးပါ http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11620652Kyee Kyee Win မှတ်ထားပါ မြန်မာ့သမိုင်းမှာကော ကမာ့သမိုင်းမှာပါ Rohingya ဆိုတာမရှိဘူး။ အဲဒီကလားတွေက ဘင်္ဂလားကုလားတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့မှာလူဦးရေများလွန်းလို့ အနေအစား ချောင်တဲ့မြန်မာပြည်ထဲကို တရားမဝင်ခိုးဝင်နေတဲ့ မွတ်စလင်ကုလားတွေ။ ပိုစ့်မော်ဒန် သာဂိ ငယ်ငယ်တုန်းက နားထောင်ခဲ့တာကဘီဘီစီ ပြည်သူတွေချစ်တဲ့ဘီဘီစီ အခုကြားရတာက တိုင်းပြည်သိက္ခာချတဲ့ဘီဘီစီ ပြည်သူတွေမုန်းလိုက်တဲ့ဘီဘီစီ (တစ်ချက်တည်းနဲ့နိုင်ငံမျက်နှာကိုအိုးမည်းသုတ်ပြီး မျိုးမစစ်ရိုဟင်ဂျကိုပွဲထုတ်တယ် အမယ်မင်း~~~~ ရွံစရာကောင်းလိုက်ပါ့ဗျာ)Linn Yaung သူတောင်းစားက ရိုးရိုးတောင်းစားတာ..ဒီကောင်တွေက တိုင်းပြည်ကို လိမ်စားနေတဲ့ကောင်တွေ.. အမြီးကျက် အမြီးစား ..ခေါင်းကျက်ခေါင်းစား..သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစား.. အဖေကျော်ပြီး ပထွေးလွမ်းတဲ့ကောင်တွေZaw Ko Ko လေလှိုင်းကြားကလူသတ်သမားဆိုတဲ့ အစိုးရရဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချီရေးစာပိုဒ်လေး သိပ်မှန်တယ်ဗျာ။ Felix Phyo Wai Thaw BBC ဘယ်မှာလဲ မင်းတို့သိက္ခာ ... ပြည်သူအသံကို နားထောင်တယ်ဆိုတာ မီဒီယာလက်နက်ကိုင်လုပ်ချင်တာလုပ် ဂရုမထားတာမျိုးလား ကလောင် ရောင်းစားနေတဲ့ သူတောင်စားဌာနလားKoThar Gyi Anna jones and BBC keen your down and say apologized to Arakanese and Burmese people....Last warning.....Felix Phyo Wai Thaw ဒီနေ့ ဒီသတင်း တစ်နှစ်ကြာကြာဆယ်နှစ်ကြာကြာ ပျောက်သွားမယ်မထင်နဲ့ မင်းတို့ရဲ့ အမဲစက်ပဲ အေးနောက်တခါ ငါတို့ယုံ့ကြည်မှုကိုတော့ ထပ်ရမယ်မထင်နဲ့... လူ့အခွင့်ရေးဘန်းပြပြီး သမိုင်းလိမ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကောင်တွေ...ဦး စံရှား BBC liar liar liar liar So shameKyaw Gyi ဘီဘီစီ က ၀န်ထမ်းတွေ လိုသာ တိုင်ြး။ပည်မှာရှိနေရင် တိုင်းပြည် ဖင်တောင်ပေါင်ရမယ် သိလားဘီဘီစီFelix Phyo Wai Thaw မင်းတို့မို့လို့ ထမင်းစားဖြောင့်တယ်.. တိုင်ပြည် သမိုင်းကို လိမ်မြီး စားမှ ထမင်းဝတဲ့ကောင်တွေ ရှက်တတ်ကြစမ်းပါကွာJames Mmt ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့် အချိန်နှင့် အလွန်နီးသည့် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ် နီးပါးကBBC News ဒီသမိုင်းလိမ်ထားသည့် မြေပုံကိုတင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် လူတွေ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့နှင့် ပြီးသွားစေသည်..... ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဒေါ်စု လွတ်ချိန်နှင့် ကိုက်လို့ ဆက်ကျော်သွားတာနဲ့ သူတို့ အကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်... ဒါဟာ တမင် မသိ မသာနဲ့ သမိုင်းကို လိန်ထားပြီး တစ်ချိန်မှာ ပြန်အသုံးချဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ကြိုတင်ကြံစည်တာ.... အခု ကံကြီးလို့ ငါတို့ အသိမြန်လို့..... နောင် နှစ်များ အတော်ကြာ ဒါကို မသလိုက်ပဲ နေလိုက်ရင် ဒီ ဘင်္ဂလီတွေ ဒါကို ကိုင်ပြီး သူတို့သမိုင်းကို ရေးဦးမယ်..... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် BBC Burmese က သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းတွေ သိမှာပဲ.....Min Ko Aung BBC လိမ်နေပြီး BBC ညာနေပြီး BBC အမှားကို အမှန်လုပ် အရှက်မရှိ တောင်းစားနေပြီး ဟန်ညောင်ရွှေတို.အဖွဲဝင် လောက်ကောင်များ ငွေရရေးတစ်ခုတည်းကြည့်ပြီး ဟန်ညောင်ရွှေပြည်တွင်းဝင်ရောက်နေချိန် အချိန်ကိုက်ဝိုင်းအော်ပြီး အရှက်မရှိ http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11620652လုပ်ကြံသတင်းတွေလွှင့်နေပြီးMratt Kyaw Thu British Council ထဲက ထွက်ပြီးပြောကြလေ။Ko Nyi Nyi Rohingya & Arakan are too different races. Rohingya is muslim, bengali. they stay beside the road by the camps. they don't have own land. even they are bengali, bengaladish government don't accept them. Arakan isabuddhism, myanmar. there are not rohingya in rakhine state. we know BBC isabig broadcasting company. why they made so dangerous mistake like that, we couldn't understand. How can we believe them? they should consider that case. we need apology for their mistake.Toee Einder Thein ဂလောက်ပြောနေဆိုနေကြတာတောင် BBC Burmese တို့ ငြိမ်ချက် ... လေဘာဘီ ကျောက်ရုပ်ထက် ကဲတယ် ..Par Par Gyi သတင်းဌာနတော့ သွားရှာပြီ၊ နာမည်တောင်ဆယ်မရတော့ဘူး... ကျန်တဲ့ မီဒီယာတွေလည်း စံနမူနာယူနိုင်ကြပါစေဗျာ...Red Yates ဒေါ်တင်ထားဆွေ Rohinjar ကိစဖြေရှင်းပေးစေလိုပါတယ်။ Talk to DVB ကလည်းငြိမ်နေတယ်။ကို ကို ဘီဘီစီကကောင်တွေ တိုင်းရင်းသားသမိုင်းကို ဖျက်တဲ့အတွက် ။ ကျိန်စာသင့်ပြီး အသေဆိုးနဲ့ မြန်မြန်သေကြပါစေ။ တိုင်းရင်းသား အားလုံးရဲ့ ကျိန်စာသင့်ပါစေ ( ရွှေဘိုသား) Evelynn Mai ဘီဘီစီ အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာ ကို တရားဝင် တောင်းပန်စေချင်ပါတယ်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။Felix Phyo Wai Thaw http://www.facebook.com/pages/Anna-Jones-and-BBC-Apologize-NOW/298010566893226 ဒီ page ကို like လုပ်ပြီး အမှန်တရားအတွက် ရပ်တည်ပေးကြပါPrince John http://www.bbc.co.uk/complaints/ မှာ သွားပြီး ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာ complaint သွားတက်ပါ ။ လူများများရ လေ ပိုကောင်းလေပဲ. ကုလား လက်ထဲ ငါတို့ နိုင်ငံ အပါ မခံနိုင်ဘူးbbc online news က http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11620652 ကို complaint လုပ်ပါHein Htet Aung ဦးကျော်ဆန်းကပြောတယ် မင်းတို့ အခုတော့ သိပြီမို့ လား BBC လိမ်နေသည် ဆိုတာ....
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ် (၃)
Paing Soe ယနေ့မှစ သင်တို့သတင်းဌာနအား ကန့်ကွက်သည်။Than Saw မြေပုံကတော့ ဖေ့စ်ဘွတ်က်တွေမှာ ရှိတုန်းဘဲ။ အားလုံး ဒေါင်းလုပ်ဒ် လုပ်ထားကြပါ။ ဒီမြေပုံလည်း ကမ္ဘာ သတင်းသမိုင်းမှာ မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်သွားပြိ။ မပျောက်မပြက်ဖြစ်အောင်း ထိမ်းသ်ိမ်းကြပါ။ နောင် ဒီလို မြေပုံတွေ ဆောင်းပါးတွေကို မြင်ရင် ချက်ခြင်း ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ကြပါ။ လုပ်လို့မရင် screen print သို့မဟုတ် ဓါတ်ပုံရိုက်ထားကြပါ။ ပြီး ကန့်ကွက်တဲ့ အနေနဲ့ ပြန်တင်လို့ရတာဘဲ။Philips Hnှမြေပုံကိုမတင်ခင် သေချာစဉ်းစားပြီးတင်သင့်ပါတယ်။ ဘီဘီစီဝန်ထမ်းတွေထဲမှာ မြန်မာတွေရှိကြတယ်မဟုတ်လားဗျာ။ နည်းနည်းတိုင်တိုင်ပင်ပင်ရှိပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ မြေပုံကိုမြင်ခြင်းအားဖြင့် ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲပြသာနာတွေ တတ်မလဲဆိုတာ သိပြီးပြီဆိုရင် မီဒီယာကနေ ပြန်လည် ရှင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပါပဲ။Nyan Myint Aung ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲတော့မသိဘူး ၊ လုံးဝကိုမှားယွင်းနေတယ်။ လုံးဝကို ကန်ကွက်တယ်။Golden Arakan Land(Rakhine) What is Rohingya?Rohing don't have In myanmar and Rakhine(Arakan) too.All Came From Bangladish.All Are realistic Bangali.Mgchaint Wynn မြန်မာလူမျိုး ၁၃၆ မျိုးနွယ်စုတွင် ရိုဟင်ဂျာ မပါဝင်ပါ။ ဘီဘီစီ အား ပြောလိုသည်မှာ ရိုဟင်ဂျာ နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့ ဆိုသည်များကို မြှောက်ပေးခြင်း မပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုပါသည်။Redd Sticker what is BBC BBC is $ .Naing Htun Lin လူသိရှင်ကြား ပြန်တောင်းပန်ပေးပါ။ ဒါ သတင်းမီဒီယာ တစ်ခုရဲ့ တာဝန်ယူမှု ပါပဲ။Kyaw Swar Myint ညီအကိုမောင်နှမများခင်ဗျား။ BBC မှ Asian-Pacific ရှိဆောင်းပါးတွင် မှားယွင်းစွာဖော်ပြထားသော မြန်မာပြည်မြေပုံအား၊ဖြုတ်လိုက်ပါပြီ။စည်းလုံးခြင်းသည် အင်အားပါ။ အဆိုပါ ဖြစ်ရပ်တွင် ၀ိုင်းဝန်းကူညီရေးသားကြသော မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ( ငါတို.အသက်ရှင်တည်ရှိနေသမျှ ငါတို.မြေကိုတစ်လက်မတောင် ကျူးကျော်မခံဘူးဟေ့ )NyiToe Aung BBC အနေနဲ့ သိက္ခာရှိစွာ တောင်းပန်သင့်ပါတယ်..။ ခင်ဗျားတို့ဟာ ကလေက၀ အုတ်ကြားမြက်ပေါက် သတင်းဌာနဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်သူလူထုကို မတောင်းပန်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့နဲ့ တန်တဲ့ ဆုလာဘ်ကို မြန်မာပြည်သူလူထုက ပေးတော့မှာပါ။ဟင် အင် ရခိုင်မှန်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ။ အခုက ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့နေရာမှာ ကုလားပုံကို တင်ပြီးတော့ သမိုင်းကို ထောက်ပြတယ်ဆိုရင် အဲဒီအမှားဟာ မဟာအမှားပဲ။ ဒါကြောင်း ဒီကိစ္စကို ပြန်လည်ဖြေရှင်ပေးစေလိုပါတယ်။ BBC စီကို နားထောင်ခဲ့သျှ အားပေးခဲ့သမျှ မျက်နှာကို ထောက်ထားပြီးတော့ သိပ်ရိုင်စိုင်တဲ့စကားလုံးကို မသုံးတော့ပါ။ အမြန်ဖြေရှင်းပေးပါ။ Nga Tun ကျတော်မွေးကတည်းကရခိုင်မှာနေလာတာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာတခါမှမကြားဖူးဘူးးကုလားတို့မာရာမာကြီးတို့ ပဲကြားဖူးတယ် ချက်ချင်းကြီးပေါ်လာပြီး ပြည်နယ်တောင်ယူလိုက်သေးတယ် အဲဒါကိုဘီဘီစီကကောမျက်ကွယ်ပြုထားတာ ကန့် ကွက်မှုတွေများလာတော့ ပုံပဲဖျက်ပေးလိုက်တယ် အဲဒါလူအခွင့်အရေးလား ဒီမိုကရေစီလား ဘာလဲ ဘယ်လဲ ..Yadana Moe မြန်မာပိုင်း အစီစဉ်က မြန်မာတွေ ဒေါ်လာအတွက် ခုလို လူမျိုးနဲ့ ဘာသာကိုစော်ကားလိုက်တာ ရှက်စရာပါပဲ ... နောင် ဒေါ်လာသိပ်မက်ရင် ဘာသာနဲ့ လူမျိုးကို တန်ဖိုးထားပြီး စော်ကားတဲ့ သတင်းတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်ပေးပါ ... မြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတွေ စုပြီး တစ်ယောက် တစ်ဒေါ်လာပေးရင်တောင် ခင်ဗျားတို့ တစ်သက် စားမကုန်ဘူးနော် ...Felix Phyo Wai Thaw ‎.မြန်မာပိုင်းအစီစဉ်က မြန်မာတွေ ဒေါ်လာရရေးတခုအတွက်နဲ့ ကုလားပြည်နဲ့ မြန်မာပြည်ကို ကာစီးထားတဲ့ တိုင်းပြည်တံတိုင်းချိုးသလိုဖြစ်မနေဘူးလား စဉ်စားစေချင်ပါတယ်။Felix Phyo Wai Thaw ဒီမြေပုံ ဒီသတင်းအအတွက် BBC ဘက်က ဖျက်လိုက်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူး...တချိန်မှာ ဘင်္ဂလီကုလားတွေက ဒီနေ့ဒီရက်ဒီသတင်းမှာ မြန်မာပြည်သားအနေနဲ့ ဒီလိုသုံးနုန်းခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီး ကိုးကားလာဦးမှာမို့လို ပြန်ပြီးဖြေရှင်းချက် ပေးကိုပေးဖို့လိုပါတယ်..Redd Sticker ပြန်လည်ဖြေရှင်းပြီး မြန်မာပြည်သူများကျေနပ်အောင် ပြန်တောင်းပန်သင့်ပါတယ် Lifelife Light ငွေရရင် ပြီးရော ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့ အမျိုးဘာသာသာသာနာကို လာမစော်ကားနဲ့။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ငါတို့တွေရဲ့တိုင်းရင်းသားအစစ်အမှန်တွေဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်ကိုမှ ကုလားတွေက သိမ်းပိုက်ချင်သေးတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ကုလားပြည်လုပ်မလို့တဲ့လေ။ တော်တော်အကြံကြီးပါပေ.။ခွေးသား ၀က်မြေးရိုဟင်ဂျာလို့မှည့်ထားတဲ့ လွင့်ဂျာ ကုလားတွေရယ်။ရခိုင်တွေကိုစော်ကားရင် ငါတို့သွေးသားချင်းဗမာတွေကလည်း ငုံ့ခံမနေဘူးဆိုတာ မှတ်ထားကြပါ။Shain Zarni Htet ခများပြန်တောင်းပန်ပါ။ လုပ်တုန်းက လုပ်ပြီး လုပ်ရဲရင် ခံရဲမှာပေါ့။ BBC ခများ အရှက်မရှိဘူးလား။ အားလုံးကို ရင်ဆိုင်ပါ။ အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ပါ။Zin Myo ကွန်မန့်ရေးချင်လွန်းလို့ LIKE လုပ်လိုက်ရတယ်... သိပ် မသတီဘူးကွာ...U Tee TeeHello BBC ဒီ အမှားအား အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်း ပေးပါ, | Anna Jones (anna.jones@bbc.co.uk) တိုက်ရိုက် Email ပို့ ၍ ကန်ကွက် ကြပါဗျို့...Lu Kalay အဲဒီရေးတဲ့ကောင် ကျုပ်အနားသာရှိလို့ကတော့ အသေသတ်တယ်...ဟင်းLu Kalay BBC ခင်ဗျားတို့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာတစ်မျုိုးသားလုံးကို မှားကြောင်းဝန်ချ တောင်းပန်ပါ။ဒီလိုသမိုင်းပြောင်းပြန်လုပ်ရပ်ကို ကျုပ်တို့ မြန်မာတစ်မျိုးလုံးက မကျေနပ်ဘူး။BoBo Zaw BBC ! ကျက်သရေ မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ကို ချက်ချင်းတောင်းပန်ပါ။Ko Latt ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် လာပြောခြင်း ဖြစ်တယ်။ ဘာမှ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသရွေ့ထပ်ထပ် ရေးနေမယ်။ Do something!BoBo Zaw BBC အဲဒီကိစ္စ ကို လုပ်တဲ့ သူ ဟာ ဘာသာနဲ့ လူမျိုးကိုစော်ကားတဲ့ အောက်တန်းစားကောင်လို့ သတ်မှတ်ရတော့မယ် ပုံပဲ ကိုယ့်ဇာတ်ကို နိုင်အောင်ရှင်းပါ။Shain Zarni Htet BBC ခများ ပြန်တောင်းပန်ရင် တောင်းပန် မတောင်းပန်ရင် ဗြောင်းဆန်အောင်လုပ်ပစ်မယ်။ ကိုယ်ရှုပ်ထားတဲ့ ကြိုး ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လာဖြေပါ။ Thein Tun Zan I am protesting BBC for its wrongful and bias journalism against ethnic profiles in Burma (Myanmar) in the article by Anna Jones. I demend BBC an genuine apology and correction of the facts in Anna Jones' Article.Lin Seing BBC အနေနဲ့ ဖျက်လိုက်ရုံတင်မကဘူး လုံးဝ ပြန်တောင်ပန်သင့်ပါတယ်။ သတင်းဠာန တခုလုပ်နေပြီး ကိုယ်လုပ်တဲ့ အမှားကို ပြန်တောင်းပန်သင့်တယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဒါဟာ စော်ကားတဲ့ လုပ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်။ တချိန်မှာ သတင်းဠာနတခုမှာပါတယ်လို့ ကုလားမူလာမူနေမှာလုံးဝ မလိုလားပဲ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေရှင်းတောင်းပန်ပေးပါ။ ကြယ် စင် လင်း အဖြူက တစ်မျိူး.. အမဲက တစ်မျိူး.. မဖြူမနီတွေ ကတစ်မျိူးနဲ့ တို့မြန်ပြေလည်း... ဆယ်ကျော်သက် မော်ဒယ်မလေးထက်တောင် ဆိုးနေပါလား...... ကိုရွှေမြန်မာတွေ တစ်ခြား အမြင်မတူ သဘောထား မတူရင်တောင်မှ... ဒီကိစ္စလေးတော့ တစ်သဘောထားတည်း ဖြစ်ကြပါဗျာ.... ကြား လူ မမိုက်ရိုင်းမိသေးခင် ပြန်ဖြေရှင်းပေးပါ.................ကြယ် စင် လင်း BBC ခင်ဗျား... မိုက်ခရိုဖုန်း ငါ့လက်ထဲမှာရှိတယ်... ကြိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့.. ဒီကိစ္စကို လည်း တန်ပြန်အရေးယူရပါလိမ့်မယ်... မြန်မာပြည်သား သန်း ၆၀ ရဲ့ ဒေါသမီးတွေ မတောက်လောင်ခင် အမြန်ဖြေရှင်းချက်ပေးပါ။Zaw Min Aung BBCကကောင်တွေရခိုင်ကိုကုလားတွေဘာကြောင်.ရောက်လာရလဲဆိုတာစုံစမ်းပါ။ဒီကိစ္ဈမှာကြောင်းဝန်ခံကြော်ငြာပေးပါZaw Min Aung ရှေ့သမိုင်းဆိုတာဝေးလွမ်းပါတယ်။အထောက်အထားဆိုတာကြာသွားပြီဖြစ်လိုအတိအကျမမှန်နှိုင်ပါဘူး။ဘိုး/ဘွားတွေလက်ထက်လောက်ကိုပဲလာစစ်ကြည်ပါBBC ကကောင်တွေပိုက်ဆံအရှောင်၇တိုင်းချောက် ၂မအော်ကြပါနန်.။အသေအရှာစုံစမ်းပါ။Lobbyist Myo မျောက်ပြဆန်တောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အရှက်မရှိလုပ်ရပ်ဘဲ။ ချက်ချင်း တောင်းပန်သင့်ပါတယ်။ပိုစ့်မော်ဒန် သာဂိ အခုထိမဖြေရှင်းသေးပဲခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်နေတာလဲ ရူးနေကြတာလား ရိုဟင်ဂျာဆိုတာမြန်မာပြည်သမိုင်းမှာအရင်ကလဲမရှိဘူး နောက်လဲမရှိဘူး Ko Tat အမြဲတမ်းလေးစားယုံကြည်ခဲ့တဲ့ ဘီဘီစီ..။ မြန်မာပြည်သူတွေ ငနွားတွေမဟုတ်ဘူး..။ အမျိုးဘာသာကို စော်ကားတဲ့အတွက်..ဒီကိစ္စကိုချက်ချင်းဝန်ချတောင်းပန်ပါ..။ Moesel Nay ဘီဘီစီရေ နှစ်ပေါင်းများစွာ ယုံကြည်ခဲ့ရတွေ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်လေရော့သလား...၊ဘယ်နှယ့်ကိုယ့်တို့ ပြည်ထောင်စု သတ်မှတ်ကတည်းက မရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးက ဒေသခံအိမ်ရှင်တွေကို ဖယ်ပြီးရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ ဘင်္ဂါလီတွေကို ရခိုင်ပြည်က လူမျိုးပါလို့ထည့်တာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်မခံပါ ဘီဘီစီ၊ကန့်ကွက်ပါတယ် ဘီဘီစီ၊ခုသတင်းကိုလည်း တောင်းပန်ဖို့ တိုင်းရင်းသားပြည်ထောင်စု တရပ်လုံးကိုယ်စား တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပိုစ့်မော်ဒန် သာဂိ ခင်ဗျားတို့လုပ်ရပ်ဟာအတိုက်အခံသမားတွေအတွက် မြိန်ရည်ရှက်ရည်ပြောလို့ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်ကြီးဖြစ်သွားပါပြီ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းသလိုဖြစ်နေပြီ ခင်ဗျားတို့ကကျုပ်တို့နိုင်ငံကိုရောင်းစားချင်နေတာကြတာလား မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုစော်ကားတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အရှက်မရှိတဲ့လုပ်ရပ်ကိုအမြန်ဆုံးဝန်ချတောင်းပန်ပါ ။ ။ (ဒီဆိုဒ်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့သမိုင်းအထောက်အထားတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ စိတ်ဝင်စားသူများဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်)Yadana Moe ဒီလို ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ သတင်းအမှားကို ထုတ်ပြန်မိတဲ့ BBC အားလုံးကျေနပ်အောင် အမြန်ဆုံးတောင်းပန်ပါ ... အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နဲ့ ရခိုင်လူမျိုးအပေါ် ဝတ်ကျေတမ်းကျေ မဟုတ်ဘဲ ကျေနပ်သည်အထိ တာဝန်ယူ တောင်းပန်ပေးပါ ... သတင်းဌာနကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ အမှားကို ကျူးလွန်မိခဲ့ရင် မှားခဲ့တဲ့ဟာကို ဝန်ခံပါ ... တောင်းပန်ပါ ... Ah Bayah BBC = Bullshit Bustard Coward အဲ့ဒီလိုပြောရအောင်ညံ့ဖျင်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်လိုက်တာပဲ ။ဘင်္ဂါလီခေါ်တောကုလားဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်သလို ခေါ်တောကိုနာမည်ပြောင်းထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာလည်း မြန်မာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူး ။ပိုစ့်မော်ဒန် သာဂိ ရိုဟင်ဂျာအမည်တပ်ထားသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းဒေသမှ စတင်ကာ လူမျိုးအရ၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ၀ါးမျိုရန် ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့် ပေါ့ပေါ့ဆော့ဆော့ နေမိပါက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ၀ါးမျိုခံရမည့် အခြေအနေရှိပါသည်။Zan Tin ဘီဘီစီ ကိုယ့်အမှားအတွက် ကိုယ်တာဝန်ယူပေးပါ။ သတင်းအမှားအတွက် အမြန်ဆုံး တောင်းပန်ပါ။Sithu Win ရိုဟင်ဂျာသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှမျိုးနွယ်စုတစ်စုမဟုတ်ပါ၊ခိုးဝင်နေထိုင်ကြသောလူများသာဖြစ်ပါသည်၊ BBC အနေနှင့်မိမိ၏ဂုဏ်သိဏ္ခာအတွက် ၊ သမိုင်းလိမ် ၊ လူမျိုးစုလိမ် ကိစ္စအတွက် BBC အနေနှင့်ရော ဆောင်ပါးရှင်ပါ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအား အမြန်တရားဝင် ၀န်ချတောင်းပန်ပါHtun Aye Thein တကယ်တော့ ခင်ဗျားတို့ကိုမျိုးချစ်သူတွေလို့သတ်မှတ်ထားတာ တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့က ပစ်ဆံရရုံသက်သက်ဘဲထင်ပါတယ် တော်တော်စိတ်ပျက်မိတယ်.......... ရိုဟင်ဂျာသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှမျိုးနွယ်စုတစ်စုမဟုတ်ပါ၊ခိုးဝင်နေထိုင်ကြသောလူများသာ ဖြစ်ပါသည်၊ BBC အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအား အမြန်တရားဝင် ၀န်ချတောင်းပန်ပါKyee Kyee Win BBC မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်မှာ တာဝန်ယူနေကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးများ ကိုယ့်မြန်မာပြည်အကြောင်း သမိုင်းကြောင်းကိုလည်းလေ့လာကြပါအုံး မြန်မာလူမျိုးထဲမှာ Rohingya ဆိုတာရှိလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး မြန်မာပီပီ မြန်မာနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေတော့ လေ့လာထားစေချင်တယ် မအအောင်လို့ပါ။Felix Phyo Wai Thaw စဉ်းစားတိုင်းဒေါ်သထွက်တယ် ခင်များတို့ သတင်းဌာနကို ... စိတ်ရှိလက်ရှိဆဲမိတော့မယ်...အွန်လိင်းမှာတခါမှတော့ ဘယ်သူ့မှ မဆဲဖုးဘူး..တောက်!!!Mar Lar Winn BBC အနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် အမြန်ဆုံး ပြန်တောင်းပန်ရမယ်...Aye Myamya ဘီဘီစီ ကိုယ့်အမှားအတွက် ကိုယ်တာဝန်ယူပေးပါ။Yin Tun Anna Jones ရဲ့ သတင်းဆောင်းပါးထဲက မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ ဘယ်ရောက်သွားသလဲ ဘီဘီစီ။Phyo Kyaw ရှက်တတ်ရင် သေလို့ရနေပြီ BBC ရေ....Felix Phyo Wai Thaw ရန်ကုန်ရောက်လို့ကတော့ ဘီဘီစီနားထောင်တဲ့ ရေဒီယိုမှန်သမျှ ရိုက်ခွဲပစ်မယ်။Nyi Mg ၀ါကာအူဒင်နဲ.ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ.အစည်းတွေကို မြှောက်ပေးနေတဲ့ RFA ကိုလဲကန်ကွက်သင့်ကြပါသည် ...
ရိုဟင်ဂျာနှင်.ပတ်သတ်၍ မဟုတ်မမှန်သတင်းများ မတင်ရန်ေ...
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ် (၂)
ဘင်င်္ဂါလီများက မြန်မာ့ဗဟို အစိုးရတွင် မူဆလင်ဆိုင်ရာ...
ဘီဘီစီ ကို အားပေးကြပါတယ် (၁)
ဗလီများကို ဖျက်ဆီးသိမ်းပိုက်ပြီ ဘုရားတည်ထားသည်ဟု ရ...
သတင်းလိမ်မှုများကြောင့် ဘီဘီစီ ကို လူအများ တင်းမာနေ...
ပြည်ပအခြေဆိုက် သတင်းဌာနများ အရင်လို ဆက် မလိမ်သင့်
ကချင်နိုင်ငံတော်၊ တေယ်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ လိုက်န...
တိဘက်သို့လက်နက် ခဲယမ်းများ ရောင်းချပေးနေသူ ကချင်လက...
အမေရိကန် နဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးများကို အတုယူပါ...
From : ..သမ္မတရုံး
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများနှင့် ဌာနဆိုင်...
နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ဇေယျသိဒ္ဓိ ရပ်ကွက်ရှိ -...